ပန်ဒိုရာ: ၀ိုင် အတူသောက်ခြင်း
I thought it was2bottles for3of us, which was about 4-5 cups for each of us. :P
ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်ဆို.. Moscato ကောင်းမယ်။ သောက်ပြီး..တကယ့်ကို ငြိမ်းးးးးးးးးးချမ်းးးးးးးးးးးးသွားတာပဲ။
၀ိုင် အတူ လာသောက်သွားပါတယ် မပန်ဒိုရာ ...
၀ိုင်အနီ တူတူသောက်ပြီးရင် သွေးသောက် မောင်နှမတွေ ဖြစ်သွားပြီပေါ့ .. နော် ...။း)
စု ပြောတာ မှန်တယ် ။ တခွက်တည်း မလောက်ဘူးလေ ။ ထပ်ဆွဲပါဦးး)
ရေလည် ကြိုက်တယ် အစ်မရေ...။ စာသားရော ပုံဖော်မှုရော...။
Wow... So Nice...!!!
လှလိုက်တာ အန်တီပန်..။း)
ကျနော့်ကိုလည်းတိုက် ဒေါ်လေး သောက်ကောင်းတယ်ဟုတ် ရီဝေေ၀လေးး)
ကဲ... သောက်လိုက်ကြဦးစို့... ...
သောက်မယ်လေ... ကြာသလားလို့.. တစ်ခွက်ထဲတော့ နည်းတယ်ဗျာ...
၀ိုင်တစ်ခွက်တည်း သောက်ရင် မခါးဘူးလား၊ နှစ်ခွက်
သုံးခွက် လောက်သောက်မှ နည်းနည်းမှန်လာမှာပေါ့။
ကျနော်တော့ အကိုကြီးကိုအောင်သာငယ် မကြိုက်တဲ့
၀ိုင်အနီတွေကို သဘောကျတယ်။ ၀ိုင်များများသောက်
နိုင်ပါစေ အန်တီပန် ရေ။
ပျူနိုင်ငံဆီက ၀ိုင်အနံ့ နဲ့ တင် ယစ်နေပြီ..။း)
ရဲနီစွန်းထင်းခဲ့တဲ့ သွေးစက်တွေအတွက် ... ၀ိုင်တစ်ခွက်လာရောက်သောက်သုံး သွားပါ၏ ..။
ဝိုင်ပုံစံလေးနဲ့ စာလုံးလေးတွေစီထားတာလှတယ်။ ဝိုင်သောက်သွားတယ်ဗျို့ ။
At Condition X...
Not For Zzzz...
Lets Drink For
C.Cheers!!! For Peace...
Cheers!!! အတူသောက်တာပေါ့ နောက်တစ်ခွက်..။
နဲနဲဝေးတော့ နောက်ကျသွားတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်ဆုံး ဝိုင်ထွက်တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား နဲ့ အော်ရီဂန်က လာရလို့၊ ... ဝိုင်လား? အင်း... နာဂစ်တုန်းက သိန်းစိန် ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ပြောသလိုပဲ နောက်မှ လိုလေသေးမရှိအောင် စီစဉ်ပေးမယ်၊ အခုက ကတိုက်ကရိုက်နဲ့ မို့....
ဘာလိုမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာ ဒီကဗျာကိုတွေ့ပြီး အကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်း)
ဒီဘက်ခဏလှည့်ဦး မ... နောက်မှာ တစ်ယောက်ကျန်သေးတယ်လေ